မျက်ခမ်းစပ်နှင့်မျက်မမြင်ကာကွယ်ရေးစီမံကိန်းကို မျက်ခမ်းစပ်တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက် အမည်ဖြင့် (၁၉၆၄) ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး (၁၉၈၄) ခုနှစ်တွင် မျက်ခမ်းစပ်နှင့် မျက်မမြင်ကာကွယ်ရေးစီမံကိန်းအဖြစ် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ကာကွယ်ကုသ၍ရသော မျက်မမြင်ရောဂါများကို လျှော့ချနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ကူးစက်မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းနှင့် မျက်တောင်စိုက်မျက်မွှေးစူးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း များမှာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးမှ သတ်မှတ်ထားသော ကင်းဝေးကြောင်းစံနှုန်း(Elimination Criteria) ပြည့်မီနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကူးစက်မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမှာ (၁၉၆၄)ခုနှစ်တွင် (၄၃)ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာမှ (၂၀၁၈)ခုနှစ်တွင် (၀.၀၈) ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၇)ခုနှစ်တွင် ကောက်ယူခဲ့သော အမျိုးသားအဆင့်မျက်မမြင်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းစစ်တမ်း (National Blindness Survey)အရ အသက်(၅၀)နှစ်နှင့်အထက် မျက်မမြင်ဖြစ်ပွားနှုန်းမှာ (၂.၉)ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
မျက်မမြင်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို (၀.၅)ရာခိုင်နှုန်းအောက်သို့ လျော့ကျသွားစေနိုင်ရန်နှင့် သက္ကရာဇ် (၂၀၂၀)တွင် ကာကွယ်ကုသ၍ရသော မျက်စိကွယ်ခြင်းများ ကင်းစင်ပပျောက်သွားစေရန် ဖြစ်ပါ သည်။
(၁)ပြည်သူလူထုအတွင်းသို့ မျက်စိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပဏာမမျက်စိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများကို ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။
(၂)အတွင်းတိမ်ရောဂါ၊ ရေတိမ်ရောဂါ၊ မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါနှင့် အခြားမျက်စိရောဂါများကြောင့် မျက်စိကွယ်ခြင်းများကို လျော့ကျနိုင်စေရန်အတွက် မျက်စိရောဂါများကာကွယ်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသ ခြင်း၊ အမြင်အာရုံပြန်လည်သန်စွမ်းစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းစသည့် မျက်စိကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်။
(၃)လိုအပ်သောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖြည့်တင်းပေးခြင်း နှင့် မျက်စိကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်အတွက် မျက်စဉ်း၊ ဆေးဝါးနှင့် ခွဲစိတ်ခန်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာများထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် မျက်မမြင်ဖြစ်ပွားမှု၏ အဓိက အကြောင်းအရင်းဖြစ်သော အတွင်းတိမ်ရောဂါကို ထိရောက်စွာကုသပေးနိုင်ရန်။
၁။ မျက်စိကုဌာနများတွင် မျက်စိဝေဒနာရှင်များအား စမ်းသပ်စစ်ဆေးကုသမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း။
၂။ မြို့နယ်နှင့်တိုက်နယ်အဆင့်ထိ ကွင်းဆင်း၍ အတွင်းတိမ်ခွဲစိတ်ကုသမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း။
၃။ မျက်စိဆရာဝန်များဦးဆောင်၍ တစ်လလျှင်စံပြကျေးရွာနှစ်ရွာတွင် မျက်စိကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၄။ ကွင်းဆင်းအဖွဲ့များမှ ကျေးရွာမျက်စိကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း။
၅။ ကွင်းဆင်းအဖွဲ့များမှ ကျောင်းမျက်စိကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း။
၆။ ပဏာမမျက်စိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု သင်တန်းပေးခြင်း။
၇။ မျက်မမြင်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းနှင့် မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းစစ်တမ်းများကောက်ယူခြင်း။
၈။ ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့များရှိ မျက်ကြည်လွှာဘဏ်များနှင့် လုပ်ငန်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
Trachoma Control and Prevention of Blindness Programme
Trachoma Control Programme was established in 1964 and transformed into Trachoma and Prevention of Blindness Programme in 1984. The aim of the program is to reduce the avoidable blindness. Active trachoma rate and trichiasis rate have been reached to WHO elimination criteria. Active trachoma rate was reduced from 43 % (1964) to less than 0.08% in 2018. the blindness rate for the age of 50 years and above was 2.9% in National Blindness Survey which was conducted in 2017.
To reduce the blindness prevalence rate to less than 0.5 percent and ultimately eliminating the avoidable blindness by 2020.
To integrate primary eye care services to primary health care services, for delivery of eye care services to the underserved population at the grass root level.
To get reduction and ultimate elimination of blindness due to cataract, trachoma, glaucoma and other eye diseases by promotion of eye health, prevention ,curative treatment ,sight restoration, sight saving surgical intervention and rehabilitation.
To reduce blinding cataract which is the leading cause of blindness by developing human resources and capacity building of strengthening eye care services through provision of necessary tools for cataract surgery such as microscopes. IOLs, instruments etc.
Outpatient clinics and perform minor surgeries
Perform Cataract and Glaucoma operations at township and station hospitals
Monthly visit to2model villages for eye health examination by the ophthalmologist and PBL team
Monthly visit to village for eye health examination by health assistant and PBL teams
Monthly school eye health examination
Provide training for primary eye health care
Lead eye banks in Yangon and Mandalay